Sei kubvisa ma ads kubva kuSpotify? | Linux Vakapindwa muropa
Ndiani asina kushandisa inozivikanwa kufambisa mimhanzi application SpotifyPasina kupokana, iko kunyorera kukuru uko kunotibvumidza isu kunakidzwa needu vatinofarira maartist uye nekuziva kutsva kwemimhanzi kuburitswa.
Kunyangwe paine zvekare vamwe vanopa mimhanzi vanopa, Spotify achiri kufarira muindasitiri, iko kushanda kune maviri modes yatinayo iyo Premium uye yemahara vhezheni.
Nechekutanga, vanotipa mukana wekugona kunakidzwa nemimhanzi chero nguva, pasina kushambadzira. uye mukuwedzera pakukwanisa kurodha pasi kumidziyo yedu kuti tikwanise kushandisa chishandiso pasina chikonzero chekubatana nenetiweki.
Nguva mune yemahara vhezheni yatinayo kushambadza mune yekushandisa interface pamwe nekushambadzira kumbomira panguva yekutamba.
Muchiitiko chedu isu vashandisi veLinux uye kune avo vanoshandisa iyo yemahara vhezheni isu tinokwanisa kubvisa kushambadza kubva kune iyo interface kuitira kuti ive yakachenaKunyangwe isiri iyo yetsika, zvinotsamwisawo kuva ne24 / 7 kushambadza.
Ndisati ndapfuurira mberi kuti ndoibvisa sei, ndinofanira kukurudzira kuti zvisambokuvadza kupa nekubaya pakushambadzira sezvo iriyo nzira inochengetedzwa rutsigiro rwechikumbiro. Saka nzira iyi ndinoisiya iri mvumo yako pamwe nekuziva nguva yekupa rutsigiro kuburikidza nekushambadza nekubvisa ganhuriro yatichaite inotevera
Para bvisa mabhaisikopu kubva kuLinux isu tinofanirwa kuvhura terminal uye gadzirisa inotevera faira nemirairo inotevera:
Iye zvino tinofanirwa kuwedzera mitsara inotevera kufaira:
Iye zvino kubva pano hatichazoona kushambadzira mune inoenderana, asi sekukurudzira kwandinoita, hazvimbokuvadza kuimisa kuti itsigire kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Sei kubvisa ma ads kubva kuSpotify?
Inoshanda zvakakwana, ndatenda! :)
Iyi blog inoyamwa. Dai ndaive Google ndaikudzima kubva kunjini yekutsvaga.
Shamwari, sekutaura kwako, izvi hazvina hunhu kana iwe uchida kubvisa premium yakabhadharwa kushambadzira. Ipapo isu tinogunun'una nezve kutsigirwa kwakashata kwekushandisa kweiyi dhizaini ye linux uye kuti vachazoda sei kupa rutsigiro kana tikaita izvi
Izvo zvinogona kuitwa pane mac uye windows. Izvi zvinei chekuita neLinux?
Kwakanaka hunyengeri, ini ndinorangarira kuti kune yefaira faira yekubvisa kushambadza kubva mumapepanhau uye mamwe masosi.
Ndinoiwana iri huru, kwete chete nekuda kwekusvotwa, asi nekuti inodziya, inodhira bhatiri uye inoderedza hupenyu hwemidziyo yedu.
Dambudziko rakaoma nekuti iyi ndiyo chete nzira yekuwana purofiti kubva kunyorera. Ini ndinonzwisisa zvinoshungurudza, asi ini ndinofunga kushambadza mune chishandiso kunogamuchirwa kupfuura pamapeji ewebhu.
Kana iwe uchida kuita zvinhu nemazvo, bvisa kushambadza kubva kubhurawuza neUblock -Kutanga (inovhara zvese).
Kana tikazvifunga, hazvina kunyanya kuita izvi sezvo mari yacho isiri kugoverwa pakati pevanhu vanoteerera, asi kune avo vanogadzira zvakanyanya.
PS: Chenjera iyo desktop application.
fucking master, maita basa
Pindura kunhengo yesikarudzi
Kutenda nerubatsiro rwako ndakakwanisa kubvisa kushambadza kunoshungurudza.
iwe uchabira akadaro
maita basa hama
Pindura kune hackaris
Ini ndinoshandisa fedora makumi matatu, ndakaita zvakataurwa uye zvinoshanda.
Asi dzimwe nziyo hadzingaridze, zvinondipa matambudziko, ndakadzima uye zvinoshanda zvakajairika.
Iyo haishande, yakawanda, yakasiya iyo inongodzokorora masekonzi mashanu uye chirongwa chakakanganiswa
Pindura kuna kalixto
Kalixto, haina kundishandira, asi pandakasiya mumhanzi pakati pekutamba, ndakauvhara ndokuwedzera mitsara yataurwa pano, ndinoichengeta uye kana ndichivhura spotify (ine playback iri pakati, haina kuva pakati, chero bedzi zvisiri pakutanga) pakanga pasisina kushambadza.
Ini parizvino ndinoshandisa ubuntu 2020 uye hazvishande kwandiri izvozvi, pamwe pane imwe nguva gare gare, ini ndichatanga kushanda.
Ini pachangu, hazvindinetse kuwana kushambadzira, zvinondinetsa ini kuti ndinoshandisa desktop desktop uye pese panouya shambadziro mukati mayo inotonhora uye ipapo inogara isina kunzwa kushambadzira kana chero chinhu uye ndinofanira kumbomira ndotamba kuti ndigadzire zvinoshanda zvekare uye nemabatiro avanoisa kushambadza maminetsi ese matatu zvinova zvisingatsungiririki kuenda kupc pese panoshambadzirwa